Drag Chain၊ Drag Chain Conveyor၊ Ball Screw Cover - JINAO
Bridge Type သည် Load Bearing Drag Chain ဖြစ်သည်။
Double- Row Bridge အမျိုးအစား Load Bearing Drag Chain
အလူမီနီယမ် Rod Cable Chain
နိုင်လွန်ပြောင်းလွယ်နိုင်သော ကော်ဒီယံ အောက်ခြေအဖုံး
သံမဏိပစ္စည်းကာကွယ်ရေး Telescopic အဖုံးများ
အဝိုင်းပုံစံ Ball Screw အကာအကွယ်အဖုံး
Flexible Protective Aluminum Apron အဖုံး
စက်အကာအကွယ် Roll Up Way အဖုံးများ
သံမဏိပစ္စည်း Telescopic Spring Cover
Hinge Type Chip Conveyor စက်ပစ္စည်း
Scraper Type Chip Conveyor စက်ပစ္စည်း
Magnetic Type Chip Conveyor စက်ပစ္စည်း
Cnc Chip Conveyor ကိုဖယ်ရှားခြင်းစနစ်
1. လမ်းညွှန်-နည်းလမ်းများကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုသည်။
2. PU coated, PVC coated, Fire-proof fabric မှထုတ်လုပ်သည်။
3. အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပြီး တပ်ဆင်ပါ။
ကုမ္ပဏီစနစ်သည် အမြဲတစေ တိုးတက်နေပါသည်။
နည်းပညာပါဝင်မှု တိုးတက်စေရန် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း၊
လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဖောက်သည်များနှင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသော စျေးကွက်တန်ဖိုးကို ဖန်တီးရန်။
TZ10 ဖွင့်နိုင်သော နိုင်လွန်ဆွဲကြိုး
Cable Drag Chain - Th...
TL စီးရီးဆွဲခြင်း၏ ဆောင်ပုဒ်...
TLG75 သံမဏိ Flexible Cable Chain
TLG စတီးလ်ဆွဲကြိုးများ c...
ကုန်ပစ္စည်းအမည် Armor Be...
Hinge chip conveyor ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
Cangzhou Jinao သည် စက်ကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ CNC စက်၊ စက်မှုစက်ရုပ်၊ Package စက်ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီသည် 2007 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး (Affiliated Shenghao Machine Tool Accessories Co., Ltd.) သည် ရေရှည်ဖော်ရွေသော စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် ကျော်ကြားသော လုပ်ငန်းများစွာရှိသည်။
ပလတ်စတစ်ဆွဲကြိုး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှာ မည်သို့သော အပြောင်းအလဲများ ရှိပါသနည်း။
ပလပ်စတစ် ဆွဲကြိုးသည် စက်ကိရိယာများ၏ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ပို၍ ပို၍ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်။စက်များ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ပလပ်စတစ်ဆွဲကြိုးများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်ဖြင့် အမှီလိုက်လိုပါက စက်အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။
1953 ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Gilbert wanger သည် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး သံမဏိဆွဲကြိုးကို တီထွင်ခဲ့သည်။kabelschlepp jiabora ၏ကိုင်ဆောင်ထားသူ ဒေါက်တာ Waldrich သည် ဆွဲကြိုးကွင်းဆက်သည် ကြီးမားသောဝယ်လိုအားကို ဖန်တီးပေးနိုင်သည့် စျေးကွက်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။1954 ခုနှစ်တွင်သူသည် * ဆွဲကြိုးများကိုစျေးကွက်သို့စတင်မြှင့်တင်ခဲ့သည်...
ပွင့်လင်းဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်အခြေခံ၍ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် CNC စနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုမဟာဗျူဟာအပေါ်သုတေသန
ပွင့်လင်းဗိသုကာလက်ရာ Wang Junping၊ Fan Wen၊ Wang An၊ Jing Zhongliang3710072၊ 1 Xi'an: T: ကောလိပ်၊ Xi'an 710032၊ Shanghai ကျောရိုးပွင့်ဗိသုကာကို အခြေခံ၍ ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာအပေါ် သုတေသနပြုခြင်း၊ "I. အစိတ်အပိုင်းများနှင့် CNC စနစ် ...
© မူပိုင်ခွင့် 20212022 : All Rights Reserved.